Nabadoonno kale oo lagu xiray Boosaaso iyo waxa la isku hayo – Hornafrik Media Network
Ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa mar kale xabsiga dhigay odayaal dhaqameedyo, kadib howlgal ay ka sameeyeeen gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Ciidamada ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay howlgallo ay ka wadeen magaaladaas ay ku soo qabteen labo Nabadoon oo lagu kala magacaabo, Maxamuud Axmed Rooble iyo Cabdicasiis Axmed Maxamed (Cabdicasiis Baydhabo).
Labadaan Nabadoon ee saakay la xiray ayaa sida la sheegay ka mid ahaa waxgarad maalintii Jimcaha la soo dhaafay magaalada Boosaaso ku yeeshay kulan dhaliilo badan loogu jeediyey Xukuumadda Madaxweyne Dani.
Xarigga odayaashaan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay Boosaaso lagu xir-xiray odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Bari ee Puntland, kuwaas oo aad u dhaliilsan xukuumadda Madaxweyne Saciid Cabdullahi Dani.
Waxgaradka iyo siyaasiyiin reer Boosaaso ee xariggu uu ku socdo ayaa kulan ay maalinkii Jimcaha Boosaaso ku yeesheen waxa ay gabi ahaanba ku qaadaceen heshiiska shirkadda Imaaraadka ee DP Worl ay ku maamusho dekedda magaalada Boosaaso, iyo heshiisyo kale oo Imaaraadka Carabtu ay kula wareegayaan garoonka diyaaradaha magaaladaas iyo goobo kale oo uu u saxiixay Madaxweyne Dani.
Wixii ka dambeeyay markii uu soo shaac baxay murankii soo kala dhex galay xukuumadda Madaxweyne Dani iyo ganacsato reer Boosaaso ah oo isku heystay heshiis uu madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole u saxiixay ganacsatadaas, waxaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareerayey khilaafka reer Boosaaso iyo dowladda uu hoggaamiyo Saciid Cabdullahi Dani.